polisy manotra fotsiny
Date: 09 février 2018 - 10:06
inona avy cas efa hitanareo ? trop be loatra lay abus de pouvoir ndray2
Re: polisy manotra fotsiny
Par: Aiza ary nareo
Date: 09 février 2018 - 12:45
Manotra izay farany zokiny ry zareo ery @ aéroport ery raha vao tonga enao.
Date: 13 février 2018 - 18:30
ka rehefa tsy manome enao dia inona no mitranga?
Date: 14 février 2018 - 08:11
dia refa tsy hanome enao dia miditra violon 48h dia miakatra parquet dia md zay fiainana eto .
Date: 14 février 2018 - 15:41
Vakansiera// tezitra ry zareo rehefa tsy manipy kely enao, atsikafony ambony ambany ny entana milamina tsara anaty valizy. Aboratsany ny lamba rehetra.
Fa raha manipy kely enao dia mandeha mahitsy, Tsy savainy akory ny bagage.
Date: 14 février 2018 - 15:57
Atoroko hevitra nareo, ny lamba maloto oh slip na bas no atao eo ambony ny sacoche dia afaka ny adalany